Imbetsaka ny famoahana motera dia tsy azo ihodivirana, Indrindra raha mampiasa menaka ratsy ianao, betsaka ny loto ao anaty menaka, Tsy vitan'ny mampitombo ny hafy sy ny triatra amin'ny motera izany, mety hiteraka fivoahan'ny solika maotera koa. Andao hiresaka momba ny famoahana sasany ao amin'ny fonon'ny valizy. Inona no mahatonga ny valizy cha ...
Ny fahasamihafana misy ny tombo-kase sy ny satroka metaly dia samy hafa ny fiasan'ny tombo-kase tombo-kase ary ny tombo-kase tombo-kase ary ny fiainana fanompoana dia manana ny lanjany lehibe. - Ny firakofana vovoka dia ny fisorohana ny fiterahana ao anaty vovoka sy potipoti-javatra hafa ka misy fiantraikany amin'ny asa. Hafa ny fitaovana, mitondra tombo-kase ...
Tombo-kase fiara mandeha amin'ny faritra samihafa. azo zaraina amin'ireto manaraka ireto arakaraka ny ampahany ampiasaina: Tombo-kiran'ny diloilo, tombo-kiran'ny crankshaft, tombo-kiran'ny motera, tombo-kase misy menaka tavoahangy, tombo-kase menaka fanodinana rano, tombo-kase menaka fanodinana, tombo-kase menaka fampitana, tombo-kase menaka famaky. tombo-kase kodiarana kodiarana, ...
tombo-kase menaka Antony tsy fahombiazan'ny fahombiazana sy ny fomba famahana olana
Ny tombo-kase momba ny solika dia an'ny singa famehezana mihetsika, ary ny fisian'ny "sarimihetsika solika mitsikera" dia fepetra ampy sy ilaina amin'ny tombo-kase momba ny diloilo. fisian'ny lubri ...
Tombo-kase solika sy kitapo mividy kit ny peratra
Rehefa te hahita tombo-kase azo antoka sy peratra O ianao any Shina.Misy mpanamboatra tombo-kase marobe, mety ho diso hevitra ianao, satria faritra samy hafa izy ireo, ary samy hafa ny vidiny..Hisy kalitao samihafa ho an'ny tombo-kase samihafa. Ahoana ny fomba hahitana tombo-kase azo antoka solika sy peratra o? 1- Ny orinasa fametahana solika ...
Fitsipika momba ny tombo-kase Hydraulika
Ny tombo-kase diloilo Hydraulika amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny akora famehezana fingotra. Ny peratra tombo-kase dia manana firafitra tsotra, fampisehoana tombo-kase tsara ary fikorontanana ambany. Azo ampiasaina amin'ny famerenana miverina sy ny fihodinan'ny rotary izy io, saingy ampiasaina kokoa amin'ny fametahana tombo-kase, toy ny tombo-kase eo anelanelan'ny fantsom-pifandraisana, ny lohan'ny varingarina ary ...
Karazana fehezan-tsolika familiana herinaratra
Tombo-kibon'ny familiana herinaratra: 1- mivezivezy familiana herinaratra baolina mivezivezy: tombo-kase solika fampidirana ary tombokase menaka rocker shaft. 2- fehezam-bary familiana fantsom-bozaka vita amin'ny kodiarana: tombo-kase menaka fidirana, tombo-kase solika pinion, tombo-kase mitondra menaka anatiny sy ivelany. 3- tombo-kibon'ny solika misy varingarina hydraulic. Ranomasina misy menaka 4 ...
Fanolorana tombo-kase sy manasongadina ny tombo-kase Magnetika
Ny tombo-kase menaka manitra dia vokatra namboarina taorian'ny fikarohana sy andrana an-taonany maro. Mampiasa am-pahamendrehana ny rafitra fanonerana andriamby sy ny teknolojia vaovao famehezana ara-nofo izy io, ary ny fametrahana mora dia afaka mamaha ireo olana izay sarotra nesorina tamin'ny tantaran'ny indostria. Tsy ny valiny ihany ...
Karazana peratra tombo-kase
Peratra miendrika U, izay matetika ampiasaina amin'ny fanamboarana ny rafitra hydraulic ao amin'ny tombo-kase famerenana. Ampiasaina betsaka amin'ny tombo-kase hydraulic silinder hydraulic machine. O-peratra dia ampiasaina amin'ny famehezana static sy fametahana famehezana. Rehefa ampiasaina amin'ny tombo-kase Rotary Movement dia voafetra amin'ny tombo-kase rotary haingam-pandeha ...
Vahaolana amin'ny famoahana solika ny tombo-kase misy menaka Gearbox?
Ny fampitana mekanika no fahita matetika amin'ny injeniera mekanika. Ampiasaina betsaka izy io mba hampitana ny fifindran'ny hery sy ny fikorontanana amin'ny alàlan'ny herin'ny herin'ny ampahany amin'ny milina, ao anatin'izany ny fifindran'ny fehikibo, ny fifindran'ny tady ary ny famindrana kodiarana. Fanasokajiana vokatra fototra: reducer, br ...
Torohevitra 9 momba ny tombo-kase tombo-kase safidy?
Inona avy ireo lafin-javatra lehibe tokony hodinihina rehefa misafidy ireo fitaovana famehezana mety amin'ny fampiharana? Ny vidin'ny tombam-bidy sy ny loko mendrika ny fividianana tombo-kase Ny anton-javatra misy fiantraikany amin'ny rafitra famehezana: ohatra, ny mari-pana, ny tsiranoka ary ny tsindry Ireto no zava-dehibe rehetra h ...
Mpanamboatra tombo-kase matihanina matihanina yiwu orinasa mpamokatra tombo-kase tombokase lehibe Mekanika miasa amin'ny medium antonony dia miankina amin'ny sarimihetsika misy ranoka noforonin'ny mpanelanelana ranoka eo anelanelan'ny faritra misy ny peratra mihetsiketsika sy mijanona ho an'ny fanosorana. Noho izany, ilaina ny ...